Wasiirka qorsheynta oo kulan la qaatay Agaasimaha Hay’adda FAO – AfmoNews
Wasiirka qorsheynta oo kulan la qaatay Agaasimaha Hay’adda FAO
Mudane Jamaal Maxamed Xasan Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta, Maal-gashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha XFS, ayaa Kulan muhiim ah maanta layeeshay Agaasimaha Xafiiska Soomaaliya ee Hay’adda Cunada iyo Beerahaa Qaramada Midowbay FAO.
Kulanka ayaa looga hadlay Dardar galinta Qorshayaasha hay’adda Beeraha FAO, ee Soomaaliya iyo xoojinta Xariirka dowladda federaalka.
Sidoo kale kulanka ayaa laysku waydaarsadatay xogo muhiim ah oo dhinaca hormarinta beeraha iyo Cunada waxaana si wanaagsan laysku waafaqay arinkaasi.
Agaasimaha Hay’adda Beeraha QM ee Soomaaliya, Mr Etienne Peterschmitt ayaa ka mahadceliyay xariirka iyo wada shaqeynta wanaagsan ee Wasaarada Qorsheynta, waxaa uuna ballan qaaday in ay fulin doonan go’aanada shirka ugu muhiimsan sida wareejinta xogaha ay aruuriyeen, tasoo xoojinayso wada shaqeynta labada dhinac.
Mudane Jamaal Maxamed Xasan Wasiirka wasaaradda Qosheynta Maal- gashiga iyo Horumarinta dhaqaalaha Dowladda Soomaaliya, ayaa dhankiisa tilmaayay in kullankan muhiimad weyn xabaarsanaa, si dowladda Soomaaliya ay kala wareegta xogta dalka ay ka aruurisay dhinacyada ay ka shaqeynso tasoo muujinayso Awooda hay’adda Istaatiijida Qaranka.
Wasaaradda Qorsheynta Qaranka ayaa wado daddaalo lagu xoorinayo Hay’adda Istaatiskada Qaranka oo ah howsha loo igmaday Wasaarada aruurinta, keydinta iyo baahinta xoggaha wadanka ee ay wasaaradda doonaysaa in ay kala wareegto hay’adaha xoggaha ka haayo dhinacyada ay Soomaaliya ka taageeran.